Global Voices teny Malagasy » Taom-bolamenan’ny firenena mampanembona ny Singapaoreana ao amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Aogositra 2015 6:03 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Mediam-bahoaka, Tantara, Tsidika, Vaovao Tsara
Nosy mahantra i Singapaora raha lasa firenena nahaleotena tamin'ny 1965. Saingy tao anatin'ny 50 taona farany dia niofo ho tanàndehibe manerantany manankarena izy. Izany no tantara hankalazain'ny mponina manerana izao tontolo izao noho ny fanamarihan'ny  firenena ny faha-50 taona niorenany tamin'ny 9 aogositra.
Raisina ho ohatra ny nananganan'ny studio iray mpanao endrika telorefy (3D) lahatsary maro mampiseho fanorenana antitra maro sy famantarana maro izay tsy misy intsony amin'izao fotoana izao. Mandritra izany fotoana izany ny diezy Twitter #GrowingUpSingaporean  nampientana mpiserasera maro hizara ny fahatsiarovany fahazaza.
Tamin'ny fampiasana fikirakirana sary amin'ny solosaina dia namoaka lahatsary  maro i Sixtrees izay “namerina” ireo fanorenana sy famantarana malaza izay tsy hitan'ny tanora amin'izao fotoana izao eny an-dalamben'i Singapaora intsony.
1. Ny Teatra Nasionalin'i Singapaora . Ny Lapan'ny teatra dia noravaina  tamin'ny fiandohan'ny taompolo 1980
2. Ny Lion'ny Tetezan'i Merdeka . Efa napetraka any amin'ny sekoly miaramila iray amin'izao fotoana izao ireo liona manandaza niambina ny tetezana tamin'ny 1950s
3. Garan-damasinin'ny Tanjona Pagar . Nosokafana tamin'ny 1932 ny gara ary nakatona tamin'ny 2011.
#GrowingUpSingaporean  Our first ciggarette stick 😂 pic.twitter.com/sshEsJfdoN 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/10/72870/
 Ny Teatra Nasionalin'i Singapaora: https://www.youtube.com/watch?v=r6rib9LhjHM
 Ny Lion'ny Tetezan'i Merdeka: https://www.youtube.com/watch?v=f39srbe8V3w
 Garan-damasinin'ny Tanjona Pagar: https://www.youtube.com/watch?v=pmaR3I3IV1A